Yiziphi izindlela zokwakha phansi phansi? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yiziphi izindlela zokwakha phansi phansi?
Hlela: UDenny　2019-12-08　Iselula
Izindlela zokubeka phansi ziyinkimbinkimbi kakhulu futhi zibiza ngaphezu kwesicelo se-tile. Izindlela ezivame kakhulu zokubekwa phansi yilezi: indlela yokubambelela eqondile, indlela yokubeka i-keel, indlela yokumiswa yokubeka kanye ne-wool floor keel yokubeka indlela. Yindlela esetshenziswa kakhulu, futhi indlela yokumisa imayelana nobuchwepheshe kakhulu futhi isetshenziswa kakhulu emhlabathini phansi nasezakhiweni ezihlanganisiwe.
Isici esiyisisekelo sendlela yokumiswa kwendlela elula yokulwa phansi yaphansi lapho phansi yokhuni ibekwe ngokuqondile epanini lokuthwala noma engcebweni yokulala ebekelwe ukubeka phansi ipulangwe ngaphandle kokushaya i-keel yokhuni. Ilungele kakhulu ukwakhiwa kwesitezi sophahla wamabhilidi kanye nokwethala kwamapherishi. Eminyakeni yakamuva, ukubeka phansi okuthile okushisa aphansi okushisa kwe-radiant heating (geothermic) kuphinde kwathatha indlela emisiwe yendlela yokugibela. Isendlalelo esimisiwe sehlukaniswe nge-viscose emisiwe yendlela ne-non-viscous emile. Umehluko phakathi kwabo ukuthi ngaphezu kwendawo yemvelo ephakathi kwe-tenon ne-groove, indlela yokumiswa kwe-viscous yokumisa kufanele ihlanganiswe ne-adhesive ukuze ivumelane ngokwengeziwe; indlela yokumiswa engabonakali ye-viscous incike kwi-tenon ne-tenon. Ukuhlanganiswa kwama-grooves kulungele ukuhambisa nokuhlangana nokulungiswa kwegebe.
Njengamanje, kukhona imihlobiso eminingi yaphansi eyamukela indlela yokumisa yokumisa, okungukuthi, lapho kukhiwa phansi izinkuni eziqinile zokwakhiwa, indlela yokumisa enganamatheli isetshenziselwa ukwenza isikwati kungakapheli unyaka. Ngemuva kokunwetshwa kwezinkuni nokuqina kuzinze ngokwanele, indlela yokumisa okwesikhashana ye-viscous isetshenziselwa ukwakhiwa ngonyaka wesibili, ukuze phansi kungamiswa isikhathi eside.
Yiziphi izindlela zokwakha phansi phansi? Okuqukethwe okuhlobene